पढ्न साढे ३ घण्टा लाग्ने, सबैभन्दा लामो अंग्रेजी शब्द - नमुना पोष्ट
पढ्न साढे ३ घण्टा लाग्ने, सबैभन्दा लामो अंग्रेजी शब्द
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ भाद्र ११, बुधबार (२ साल अघि)
एजेन्सी / आम रुपमा मानिसहरुलाई युरोपको कुनैबेलाको मुलुक (हाल टुक्रिसकेको) चेकोस्लोभाकिया (Czechoslovakia) जस्ता अंग्रेजी शव्द उच्चारणसमेत गाह्रो हुन्छ । तर जब कुनै एउटा अंग्रेजी शव्द उच्चारण गर्नका लागि साढे ३ घण्टा लाग्यो भने के होला ?
हो, यो दुनियाँमा एउटा यस्तो अंग्रेजी शब्द छ जसलाई पढेर सिध्याउन साढे ३ घण्टा लागछ। एउटा मात्र शब्द पढ्नका लागि साढे ३ घण्टा लाग्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर नपत्याएर के गर्नु ? १ लाख ८९ हजार ८ सय १९ वटा अक्षरले बनेको उक्त अंग्रेजी शब्दकाे सही उच्चारण गर्न जो कोहीलाई दाँतबाट पसिना छुट्दछ ।